Samsung dia nivarotra Gear VR | 5 tapitrisa Vaovao momba ny gadget
Ny taona nahavitanay, dia ny taona nanombohana ny zava-misy virtoaly, zava-misy virtoaly izay avy amin'ny tanan'i Oculus sy HTC. Ny vidin'ireto fitaovana ireto, izay maodely ara-barotra voalohany azo eny an-tsena, tsy dia mora vidy izy ireo. Saingy mila fitaovana mahery vaika kokoa noho ny mahazatra ihany koa izy ireo, koa raha te hametraka tsara ny lohanay amin'ity haitao vaovao ity isika dia mila manana, ekipa matanjaka ampy hamindra ireo lalao misy ankehitriny, ankoatry ny fividianana ireo fitaovana. .
Saingy tsy ilaina ny mampiasa vola be raha te-hanomboka hanome ny pines voalohany amin'ity karazana zava-misy virtoaly ity isika. Eo an-tsena isika izao dia afaka mahita solomaso marobe, izay manampy ny smartphone, afaka mankafy horonantsary 360 degre isika, tsy lalao ireo, fa ho manomboka mahita ny azo atao an'ity teknolojia ity dia manomboka.
Anisan'ireo solomaso misy eny an-tsena, Samsung no manome maodely ho antsika, Gear VR misy endri-javatra lehibe kokoa, na dia lojika aza, tsy mifanaraka amin'ny maodely farany nataon'ny mpanamboatra Koreana ihany izy ireo. Samsung dia nanambara tao anatin'ny sehatry ny Consumer Electronic Show izay tanterahina any Las Vegas, izany ny isan'ny vera virtoaly napetraky ny orinasa eo amin'ny tsena dia dimy tapitrisa Ny singa.
Azo namboarina ireo tarehimarika ireoKoa satria isaky ny mandefa fitaovana vaovao ny orinasa, ao anatin'ny fe-potoana famandrihana, dia matetika no manome maimaimpoana ny Gear VR ho an'ireo mpampiasa voalohany nitahiry ilay fitaovana. Rehefa mandeha ny fotoana ary mihena ny vidin'ity karazana fitaovana ity, izay manodidina ny 100 euro, ity karazana Solomaso ity dia ho lasa mpampiasa isan'andro an-tapitrisany maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Zavamisy tsara » Samsung dia nivarotra Gear VR 5 tapitrisa
Samsung Galaxy S8, azo aseho amin'ny 18 aprily